Origami - evamile lokusungula izingane kanye nabantu abadala. Ngisho ingane encane kunazo zonke ngenjabulo ukuwabuka, abadala eligoqiwe kundiza yephepha noma isikebhe, bese ukudlala naye. Zibandakanye iphepha alo ndawonye kungaba esemncane, kukhona izikimu origami izingane eminyakeni 4-5.
Yini eyosisiza e ukuthuthukiswa ingane umsebenzi? Origami ngomntwana kungase kube umdlalo okuthakazelisayo, okuyinto eba lokusungula nokushesha. Egoqekayo iphepha kahle eba emihle motor amakhono, ngoba lapho alo amashidi ngcono kokuxhumana iminwe. Lokhu kuzosiza ekuthuthukiseni yokukhuluma, ngokubhala, nasekufundiseni kuwusizo umculo esikoleni.
Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukisa ukufunda ngokunembile, ukukhalipha, inkumbulo, logic, assiduity, ukucabanga kwendawo, umcabango. Ukusebenza izibalo weJiyomethri kuzosiza baqonde kangcono izibalo.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe origami izingane eminyakeni 4-5 - I-umsebenzi Akudingi amathuluzi akhethekile. Badinga kuphela ephepheni. Ehlukahlukene kunqubo kungabasiza amapensela abavamile, izimpawu, iphepha anemibala, sequins, ubuhlalu, izinkinobho, njll
Kakhulu elula origami izingane eminyakeni 4-5
AmaSu ingatholakala omagazini zezingane noma nge-Internet, futhi kokuba isipiliyoni, baze ngokwami. Okokuqala, ingane kufanele sibe nesithakazelo, zikhona izibalo eziningana ngokuzimela. Ngokushesha okukhulu, ingane ngeke sithande ukuzixoxa isenzo sakho. Cala izimo ezilula, futhi kancane kancane bathuthele eziyinkimbinkimbi. Okokuqala kungcono ukukhetha izilwane elula izimbali.
Tulip - kuyinto sibalo elula aphume iphepha ezinemibala. Kungaba isipho umama, ugogo, uthisha noma ukuhlobisa ikhadi lokuzalwa. Kuyinto kakhulu elula ingane lula phinde it.
Thatha ishidi sikwele ephepheni bese ugoba ngokuphambeneyo. I kwaphumela goba engeli unxantathu, njengoba kuboniswe kulo mdwebo, ephansi goba isihloko imbali. Ukuze womshini stem bend amakhona isikwele esisha phakathi nendawo, Songa sibalo okuholela nengxenye futhi bend nekhona elingezansi. Manje izingxenye kungenziwa ethe njo ndawonye noma exhunywe ishidi ephepheni.
I elula kunazo kukhona isilwane izibalo. Ingane ifunda ukuba aqaphele izithombe, kuyathakazelisa ukudlala izilwane ezisencane. Bangakwazi udwebe amehlo, ikhala, umlomo, amadevu, ukuhlobisa amapensela, ukubutha iqoqo inganekwane nezinhlamvu noma nezilwane, zasendle, ulwandle, Afrika, njll
Ngokwesibonelo, ukwenza inja eligoqiwe ishidi square ngokwanele ngokuphambeneyo abavela emagumbini ukwakha elengayo ohlangothini amathebhu, futhi kusuka phansi - ngesifonyo. Manje ungakwazi ukudweba noma unamatsisela ekhaleni namehlo.
Yenza ikati akulula njengoba inja. Vele kudingeka sigobe ezindlebeni nzima, ngoba nomlomo wesilwane kuyinto ngakolunye uhlangothi.
Ngakho ungakha zoo! Of onxantathu ka nobubanzi ezahlukene ukwenza izilwane esifubeni, ukudweba noma usike bese unamathisela imisila ngezidladla.
Origami iphepha izingane iminyaka 4-5 yinkimbinkimbi isilinganiso
Izingcezu ethandwa kakhulu - izindiza futhi umkhumbi - kungenziwa eligoqiwe umzali ngamunye. Esekhulile ngokushesha izingane ngekhanda ukulandelana yezenzo bese uphinda masinyane.
Okuningi origami eziyinkimbinkimbi izingane 4-5 iminyaka akubalwa kusikisela sezokwakha eziningi egoba, kungase libe izingxenye ezilula. Ngokwesibonelo, origami "Mansion." Kusukela izingxenye elula efana "amakamelo encane", ukudala indlu bazohlala indaba yakhe izinhlamvu. Ungakwazi ukuza up igumbi isilwane ngasinye, sibadonse ifenisha, stavenki ethe njo amafasitela. Lokhu Hack kungaba iphrojekthi umkhaya wangempela, okuyinto uzobe njalo ithuthukiswe futhi olusha.
Indlela hang lodonga iphepha: abakhi amathiphu